PICS: #Zimbabwe in limbo as Mugabe exit talks continue | IOL News
Zimbabwe / 16 November 2017, 6:53pm / FARAI MUTSAKA
A person passes a newspaper headline in Harare, Zimbabwe. AP Photo
Workers walk past a photograph of President Robert Mugabe at a government building in Harare, Zimbabwe. Picture: Ben Curtis/AP
A woman resident looks out from behind the metal grill of an apartment block, on which a mural is painted, in the low-income neighbourhood of Mbare in Harare, Zimbabwe. Picture: Ben Curtis/AP
Quiet talks are underway to resolve Zimbabwe's political turmoil and the likely end of President Robert Mugabe's decades-long rule. Picture: AP
Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai speaks to the Associated Press after giving a press conference at his home in Harare, Zimbabwe. Picture: Ben Curtis/AP
A military vehicle is seen on a street in Harare, Zimbabwe. Picture: AP
Children carry a lunch of chips past their apartment block in the low-income neighbourhood of Mbare in Harare, Zimbabwe. Picture: Ben Curtis/AP
A woman resident assists another to put her baby on her back in the low-income neighborhood of Mbare in Harare, Zimbabwe. Picture: Ben Curtis/AP
Children walk past their apartment block in the low-income neighborhood of Mbare in Harare, Zimbabwe. Picture: Ben Curtis/AP
Men play pool at an open-air pool hall next to an apartment block in the low-income neighborhood of Mbare in Harare. Picture: Ben Curtis/AP
Zimbabweans queue outside a bank to withdraw cash as armed soldiers patrol the streets in Harare. Picture: AP
Read: Mugabe must resign in interest of #Zimbabwe: Tsvangirai
Read more: Tsvangirai in #Zimbabwe to discuss co-operation with military